Nhau - DUTTILE IRON yekugadzira tambo yakaunzwa uye inomhanya kubvira 2021
Ductile Iron fekitori yakavamba kubvira 2021
1. Nhanganyaya Pfupi:
Ductile yakakanda simbi ndeye-yakasimba-simba simbi zvinhu zvakagadzirwa muma1950. Basa rayo rakazara riri padyo neiro resimbi. Zvichienderana nebasa rayo rakanakisa, rave rakabudirira kushandiswa kukanda mamwe masimba akaomarara uye neanoda simba zvakanyanya, kuomarara, uye kupfeka kuramba. Ductile cast iron yakagadzira nekukurumidza kuita simbi yesimbi zvinhu zvechipiri chete kune grey cast iron uye inoshandiswa zvakanyanya. Izvo zvinonzi "kutsiva simbi panzvimbo yesimbi" zvinonyanya kureva ductile iron. Ductile kukandira simbi inowana iyo ductile graphite ne spheroidization uye inoculation kurapwa iyo inonyatso kunatsiridza mehendi zvivakwa zvesimbi simbi, kunyanya kupurasitiki uye kuomarara, nokudaro kuwana simba rakakwira kupfuura kabhoni simbi.
Ductile simbi castings ingangove yashandiswa mune ese akakura maindasitiri zvikamu, izvo zvinoda yakakwira simba, plastikiity, kuomarara, kupfeka kuramba, kwakasimba kupisa uye mejaja kuvhunduka kuramba, yakakwira kana yakaderera tembiricha kuramba, ngura kuramba, uye kuenzana kugadzikana. Kuti usangane neshanduko idzi mumamiriro ekushandisa, ductile iron ine mamakisi mazhinji, ichipa huwandu hwakawanda hweanogadzira uye epanyama zvivakwa.
Iyo ductile yakakanda simbi yekuparadzanisa zvikamu zve undercarriage zvikamu, senge yekupedzisira butiro yeanotakura roller, kora yeiyo track roller, bracket yeiyo idler
5. Kugadzira kugona: 500-550T / Mwedzi, zvoga kugadzirwa mutsetse.
1) Inofananidzwa nesimbi yakakoswa, ductile cast iron ine mukana wakakwana musimba. Iyo tensile simba re ductile cast iron ndeye 60k, nepo iyo yakasimba tensile yesimbi yakakanda ingori 31k chete. Iko goho kusimba kwe ductile kukanda simbi ndeye 40k, nepo iyo simbi yakakandwa isingaratidze iyo goho simba uye pakupedzisira kuputsika. Iko-kune-mutengo chiyero che ductile iron yakakurisa kupfuura iyo yesimbi yakakandwa. Simba re ductile iron rakafanana neyakagadzirwa nesimbi.
2) Inofananidzwa nesimbi yakakandwa, Ductile cast iron ine yakakwira goho simba, pane yakakanda simbi. Iyo yakaderera mutengo we idenderedzwa graphite yakakanda simbi inoita kuti ichi chinhu chive chakakurumbira, iyo yekukanda kugona iri yakakwira, uye iyo machining mutengo we idenderedzwa graphite cast iron yakaderedzwa.
3) Naizvozvo, mushure mekumanikidza-kurodha zvikamu zve ductile cast iron yakagadziriswa neyakaisa annealing kutenderera, iyo idenderedzwa chimiro mukati me ductile cast iron inogona zvakare kubvisa iyo inotsemuka iyo iyo flake graphite mukati yesimbi simbi iri nyore kuburitsa. Mune microphotograph yesimbi ductile, mitswe inogona kuoneka kupera mushure mekusvika iyo graphite bhora. Mune indasitiri yesimbi yeductile, aya mabhora e graphite anonzi "maputi ekumisa" nekuda kwekugona kwavo kudzivirira kutsemuka.